Oomishaalee karaa seeraan alaatiin gara biyyaatti galuun gabaa irra oolan irratti tarkaanfiin fudhatamuuf - ዜና ከምንጩ
Oomishaalee karaa seeraan alaatiin gara biyyaatti galuun gabaa irra oolan irratti tarkaanfiin fudhatamuuf
Oomishaalee qorichaa fi qabiyyee qorichummaa qabanii fi karaa seeraan alaatiin gara biyyaatti galan; utuu hingalmaa’inii fi seera-qabeessummaan isaanii hinmirkanaa’in gabaa irratti yoo argaman tarkaanfii akka itti fudhatu abbaan taayitaa too’annaa nyaataa fi qorichaa Itoophiyaa beeksiseera.
Biyyoota adda addaa irraa; keessumattuu karaa daldaltoota gara Emireetota Araba Gamtoomanii, Tuurkii fi Chaayinaatti daldalaaf deddeebi’aniitiin kan gara biyyaatti galan qorichoonnii fi oomishaaleen qabiyyee qorichummaa qaban fayyaa hawaasaa irratti hubaatii olaanaa qaqqabsiisaa jiraachuun kan ibsame yoo ta’u; oomishaaleen kun utuu balaa hammaataa hinqaqqabsiisin dura abbaan taayitaa too’annaa nyaataa fi qorichaa Itoophiyaa qaamolee seeraa dhimmichi isaan ilaallatu waliin tumsuudhaan tarkaanfii fudhachuuf hojjetaa akka jiru beekuun danda’ameera.
Nyaata dabalataa; kan boca qaamaa sirreessu, rifeensaa fi hareeda kan dheeressu, kan godaannisa bal’eessu, turtii yeroo saal-quunnamtii kan dheeressu fi oomishaaleen kana fakkaatan qaamolee dhimmichi ilaaluun utuu hinhayyamaminii fi fayyummaan isaanii osoo hinmirkanaa’in gara biyya keessatti waan galanuuf hawaasni of eeggachuu akka qabu waajjirri abbaa taayitichaa ibseera.
Maqaan ‘siiriyees maas’, haayiper boold’, ‘piyuur’, ‘huweey’, jedhamu kennameefii shaanxaadhaan geejjibamanii gara biyyaatti kan galan oomishaaleen jabinaa fi sirreeffama qaamaa; birrii kuma sadii fi 500 hanga birrii kuma jahaatti gabaatti akka dhiyaatan beekuun danda’ameera.
Abbaa taayitaa too’annaa nyaataa fi qorichaatti ogeessi olaanaan too’annoo nyaataa Daagim akka jedhanutti yoo ta’e; gahee nyaataa bakka ni bu’u; hirree qaamaa ni jabeessu; akkasumas boca ni kennu jechuun toora marsariitii hawaasaa adda addaatiin beeksifni kan himamuuf kanneen akka ‘siiriyees pirootiin’ kan jiraniif dhaabbatichi beekamtii akka hinkenniniif himanii; beeksisa oomishaalee kanaa karaa kamiinuu dabarsuun seeraan kan dhorkame ta;uu ibsaniiru.
Kan akka ‘Qafiiraa dot kom’ fi miidiyaan hawaasummaa hordoftoota hedduu qaban wayita oomishaalee seeraan alaa kana beeksisan ni mul’atu. Oomisha qaama dhimmichi ilaaluun hayyamni hinkennaminiif haala kanaan beeksisuun gocha seeraan alaa akka ta’e ibsameera.
Kanuma hordofuun; ogeessa fayyaa hawaasaa kan ta’an Nitsuuh Warq-Affes; marsariitiiwwan hawaasaa irratti beeksisni qorichoota gogaa irratti dibamanii fi afaaniin liqimfamanii yeroo gara yerootti baay’ataa akka dhufan taajjabuu isaanii Addis Maaledaatti ibsanii; keessumattuu qorichoota gogaa irratti dibaman; keessumattuu kan rifeensa mataa guddisan; mataa moleessuu irraa jalqabee wallaanamtoonni ‘infeekshiiniin adda addaa irratti mul’ate akka isaan mudate dubbataniiru.
Ogeessi abbaa taayitichaa addatti Addis Maaledaatti akka himanitti; oomishaaleen nyaataa fi tumsitoonni isaanii warshaaleetti oomishamanii bahan; wantoonni nam-tolchee ta’an waan itti dabalamanii dhiyaatanuuf nyaata uumamaa bakka bu’uu hindanda’an. Itti dabaluunis; waan boca qaamaa sirreessan fakkaachuun hirree gabbisuuf ykn jabeessuuf keemikaalonni fudhataman; waan of danda’anii bocaa fi cimina qaamaa gabbisan fakkaatanii dhiyaachuun isaanii guutummaadhaan dogongorsaa fi fudhatama kan hinqabne ta’uu himaniiru.
Omishaaleen ogeeyyii fayyaatiin utuu hinajejamin; hawaasni; keessumattuu dhiironni rakkoo saal-quunnamtii fi hanga qaama dhiiraa guddisuuf itti fayyadaman kan akka ‘taayitaan jeelii’ fi ‘viimaaksi’ jedhaman birrii kuma lamaa hanga birrii kuma saddeetiitti gabaa irratti gurguramu. Oomishaaleen kun sadarkaa manneen qorichaa (faarmaasiitti) kan hingurguramneef seera-qabeessummaan isaanii shakkisiisaa ta’uu danda’a kan jedhan ogeettiin kun; oomishaaleen kun hubaatii yeroo dheeraa waan hordofsiisanuuf hawaasni dursee ogeeyyii fayyaa utuu maryachiisee; kisaaraa maallaqaatiin olitti fayyaa isaa balaa irra buusuu irraa baraaruu ni danda’a jedhaniiru.
Total views : 7538426